Ọkachamara Semalt: 4 Ụdị Mmebi Iwu n'Intanet Ị Pụrụ Iche Taa
Ka internet na-aga n'ihu ijikọta ọtụtụ kọmputa, ndị omempụ na ndị omempụ ndị ọzọ cybernọgide na-emepụta usoro ọhụrụ iji mezuo mkpa ha. Ngwaọrụ nke ndị na-agba ọsọ na-anọgide na-adị mma dị ka nkà na ụzụ ọganihu. Mgbe anyịna-eme weebụsaịtị, obere ka anyị na-atụle eziokwu ahụ na onye na-egwu ihe nwere ike iwepụ ọtụtụ ihe bara uru sitere na kọmputa. N'ihi ya,nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa na nke ndị ahịa gị dabeere na ha nke ukwuu.
Iji zere ọnọdụ ndị a, ọ dị mkpa mgbe niile itinye ụfọdụ ụfọdụarụ ọrụ gị na kọmputa na kọmputa. Ọ bụ ya mere Ross Barber, Onye Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ihe Nlekọta Ọkachamara ,kwuru kpọmkwem ihe ndị kasị ewu ewu ụdị nke kọmputa metụtara frauds:
Mpụ a gụnyere itinye akwụkwọ weebụ adịgboroja ma ọ bụ cloned. Onye na-egwu ihe ma ọ bụ cybercriminaln'azụ ebumnobi nwere ike ịmepụta ibe nke yiri nke ụdị ụdị weebụ ma ọ bụ banye na ụdị. Na-esote ọwa a, scammerwee chọpụta ụzọ isi mee ka ndị ahụ metụtara ahụ pịa njikọ ndị ahụ. Usoro a na-enye aka karịsịa n'ịzụta ozi nkeonwe dikaokwuntughe na ozi kaadị akwụmụgwọ.
Hacking bụ otu n'ime ndị kasị ochie ịntanetị ikpe. Ịgba egwu gụnyere iwu na-akwadoghịịbanye na kọmputa na ịrụ ọrụ ụfọdụ na-akwadoghị na usoro. Ọtụtụ n'ime hacking cases gụnyere ọrịa ọjọọn'azụ onye na-akpọ hacks..Ịgba ọsọ na-eme ka ọtụtụ ndị na-eme mpụ ma na-eme ihe ike. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agba ọsọ nwere ike ịnweta ụlọ akụ dị iche icheabanye na odide dị iche iche. Mpempe akwụkwọ ndị a nwere ike ịnweta n'elu web ọjọọ ahụ na ndị mmadụ n'otu mba ndị na-emepe emepe bụ ndị na-enyefe ego ahụenweghị nchọta.
3. Ịmara ohi
Ozi nkeonwe nwere ike ịdaba na ngwa kọmputa ngwa ngwa. Dị ka ọmụmaatụ,hackers nwere ike iji usoro dị mfe dị ka SQL ogwu ogbugba ma nweta ntinye na nchekwa data nke zuru nke mkpa ahịa ozi. N'ihi ya,hacker nwere ike igbanwe, bulite, budata ma ọ bụ hichapụ faịlụ na sava weebụ na-enweghị ike. Ọzọkwa, hacker nwekwara ike ime ụfọdụ iwu iwu akwadoghịdị ka izu ohi ozi nkeonwe iji mee ihe na arụmọrụ ịntanetị ndị ọzọ.
4. Ibochi nke weebụsaịtị
Ụfọdụ ndị omempụ cyber na-eji nkà ha eme ihe n'emeghị ka ọ bụrụ ihe na-emetụta. Dị ka ọmụmaatụ, n'ebe ahụbụ ebe ebe ndị omempụ na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ nke bụ oyiri nke saịtị ọzọ. Nzube ebumnuche n'azụ aghụghọ a nwere ike ịgụnye ụfọdụ mkpa makana-awakpo ndị na-adịghị ike. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha na-eme ka ndị mmadụ na-azụ ahịa na ụfọdụ n'ime ụlọ ahịa ha na-echekwa echefu, naanị iji zụọ nnukwu egosite na ha. Na ọnọdụ ndị ọzọ, ozi nkeonwe pụkwara ịdọrọ ndị na-agba ọsọ n'ụzọ dị otú a.
Ụdị ọnụọgụ Intanet na-arị elu mgbe ọganihu nke usoro kọmputa.E nwere ọtụtụ ikpe gụnyere itinye ndị na-arụ ọrụ cyber nchedo mmadụ na ọnọdụ nchịkwa. N'ọnọdụ ndị a nile, ndị mmadụ dị ka ndị na-agba ọsọna scammers na-arụ oké ọrụ. Ihe ọmụma banyere ụdị na ụdị nke aghụghọ nke kọmputa nwere ike ịba uru maka usoro usoro na-arụ ọrụ. Nandị ọzọ, njide kọmputa na-abụ ihe ndabere nke ndị mmadụ nwere ike ịchọta ma mee ka hacks dị ka phishing. Ntuziaka a nwere ike inyere webmasterma ọ bụ blogger na-amụba nchebe nke ihe ndị ahụ n'ọnọdụ ebe hacking zuru ezu Source .